ဒီနေ့ (၄၄) လမ်းမှာ ဒလန်သတင်းပေးမှုကြောင့် ရဲနှင့်စစ်သားများ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရာ လူ… – PVTV Myanmar
·5months ago ·48 Comments
ဒီနေ့ (၄၄) လမ်းမှာ ဒလန်သတင်းပေးမှုကြောင့် ရဲနှင့်စစ်သားများ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရာ လူငယ် (၅) ဦး ။ ကျား (၄) ဦး ၊ မ(၁) ဦးတို့ တိုက်ပေါ်မှ ခုန်ချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါးစေ ရဲနှှင့်စစ်သားများ အပြန်အလှန်ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့ အသံဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အသံများအရ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာက
ဗြူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးထွန်းနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ပြောကြားနေမှုတွေမှာ အဘသီဟ ဆိုသူနှင့် စိန်လှိုင်ဝင်းဆိုသူလဲ ပါဝင်တာကို ကြားရပါတယ်။
ပြောကြားချက်များအရ တိုက်ပေါ်မှခုန်ချသော လူငယ် (၅) ဦးစလုံးသေဆုံးသွားဖွယ်ရှိပါတယ်။
Like – 33K Share – 13014
2021-08-10 at 9:50 PM
မအလတွေ လီးအဘ ပါလား ငလမသတွေ
Ch An Ge says:
ဝဋ် ဒီဘဝမှာဘဲ လည်ပါ စေ
ပေးလိုက်တဲ့သူက ရာအိမ်မှုးမြင့်အောင် ဆိုသူပါ။
Aung Ko Ko Latt says:
2021-08-10 at 9:53 PM
မင်းကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးဒုက္ခ ရောက်နေရတာ။
Khinkyaw Zaw says:
က​လေး​တွေက အ​သေခံ​နေပြီ နင်တို့လက်ထဲအ​ရောက်မခံ​တော့ဘူး နင်တို့ရှက်တတ်ပါ​တော့​အောက်တန်းစား​တွေ
Snow Sky says:
2021-08-10 at 10:03 PM
ဒလန်​တွေက လမ်းတိုင်းမှာ ရှိတယ်
လမ်းတလမ်းရဲ့ ဟိုဘက်ထိပ် နဲ့ ဒီဘက် ထိပ်​တွေမှာ ရှိတယ်
Zin Mar Swe says:
ဒင်းတို့လည်း အသေထွက် ထွက်ရအောင်ထိ လုပ်မှာ
Thant Wai Yan says:
2021-08-10 at 10:04 PM
မင်းတို့ ပြန်စဉ်းစားကြပါဦး ငါတို့လူမျိုးအချင်းချင်း ဗမာအချင်းချင်းတွေလေကွာ မင်းတို့ သားသမီး တူလေး အရွယ်လေးတွေကိူ ဘာလို့ ဒီလောက် ရက်စက်ရတာလဲကွာ မင်းတို့ အဲ့လောက် ဦးနှောက် မဲ့နေပီလားကွာ
စိတ်ဓာတ် Rlp. 😢😢😢
Kalay Yml says:
2021-08-10 at 10:06 PM
ဘယ္လိုစိတ္နဲ႔မ်ား အသက္ကိုစေတးရဲရတာလဲ ရဲေဘာ္တို့ရာ…။
ရန္သူ႔ဆီမွာ ဒူးေထာက္ရတာထက္ ေသရတာကျမတ္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ရင္ထဲနင့္ၿပီး ခံစားမိလိုက္ပါတယ္၊ ေတြ႕လိုက္မိပါတယ္။ ထြက္ေျပးရင္းျပဳတ္က်တာ မဟုတ္ဘူးတဲ့၊ အလြတ္ႀကီး ခုန္ခ်သြားတာတဲ့၊
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေမးၾကည့္တယ္၊ အဲဒီေလာက္ သတၱိရွိရဲ့လားလို့၊ ဟင့္အင္း မေသခ်ာပါဘူး။
တကယ့္ကို ရင္နာနာနဲ႔ ဦးညြတ္အေလးျပဳပါတယ္။
2021-08-10 at 10:07 PM
ကျဆုံးသွားတဲ့ ကလေးတွေ ကောင်းရာရောက်ကြပါစေ ခသတစတွေ ဒလန်တွေလည်း မြန်မြန်မာလကီးယားပါစေ
ကိုယ္ေမ ကိုယ္လိုး ေတြ တေန့ ဝဋ္လည္မယ္ ကိုယ္ေမကိုယ္လုိးေတြရဲ့ ေဒါသထြက္တယ္ စခစ ကိုေမကိုလ္ုးမ်ား
May Sandar Lwin says:
ရင်တွေနာကျင်နေရပြီ သူတို့လက်ထဲ အဖမ်းခံရတာထက်စာရင် သေတာကောင်းတယ်လို့များဆုံးဖြတ်သွားတာလားကလေးတို့ရယ်…
အပွင့်တွေ အခတ်တွေတတ်ဖို့က အဲ့လိုလုပ်မှ ရတာ မြန်မာပြည်ပဲ လီးပဲ မအလ
Shwe Lai says:
ပြောစရာစကားလုံးမရှိတော့ဘူး သားတို့ရေ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ဟိုး….ကောင်းကင်ကြီးမှာ အလင်းလက်ဆုံးတောက်ပနေလိုက်ပါ။
Ma May Soe says:
​ေပးဆပ္​မႈ​ေတြ က တန္​းဖိုးႀကီး​ေလ ပိုရင္​နာရ​ေလပါလား ​ေနႏိုင္​လြန္​းတဲ့ လူတစ္​ခ်ိဳ႕အတြက္​ ​ေပးဆပ္​မႈ​ေတြတန္​ရဲ႕လား သူရဲ​ေကာင္​းတို႔​ေရ
မိသားစု​ေတြ​ေတာ့ ဘယ္​လိုသာ ခံစား​ေနရမယ္​မသိ 😔😔😪😪😪😪
Sakura Aye says:
စိုးထွန်းတို့၊ သီဟတို့ ၊ စိန်လှိုင်ဝင်း၊ ရာအိမ်မှူးတို့ မိသားစုတွေ ကိုသိရင်သတင်းပေးကြပါဟ ၊ ပြည်သူကဒီဒလန်နဲ့ သူ ့မိသားစု ကိုပါ အပြတ်ရှင်းမှ ရမှာ ၊ ငါ့မိတ်ဆွေဆိုပြီး မပေးဘဲ မနေကြပါနဲ့ ၊ ဒလန် တွေမကုန်သရွေ့ ဒီပွဲကမပြီးဘူး ၊ ကလေးတွေလဲ ထွက်ပေါက်တွေစဉ်းစားထားကြပါကွယ်၊ ရန်ကုန်ကလူတွေလည်း ကိုယ့်အိမ်နားက ဒလန်တွေစုံစမ်းပြီး သတင်းပေးကြပါ၊ အားရင် တအိမ်နဲ့ တအိမ်ချောင်းနေမှရမယ်၊ ဘယ်သူကဒလန်လဲဆိုတာ ၊ မျက်စေ့ဖွင့်နားဖွင့်ထားကြပါ၊
Sandar Hlaing says:
မတန်မရာတွေ အိုကြီးအိုမအိုနာရွတ်တွ‌‌ေတွနဲ့သူတို့မြေးအရွယ်လောက်‌ေလးတွေကို လုပ်တာ 🤮🤮🤮
ရင်နာရပေမယ့် သူရဲကောင်းတို့ကိုလေးစားပါတယ် ခွေးဒလန်တွေ မြန်မြန်မျိုးတုံးပါစေကွာ 😤😤
​ကောင်းရာ သုကတိလား ကြပါ​စေလို့ ဆု​တောင်း ​ပေးပါတယ် 💔😔 အာဇာနည်​လေးတို့
အာဇာနည် ​တွေ ထပ်မလိုချင်​တော့ပါ
ဦးညွန့်အ​လေး ပြုပါတယ် အာဂ သူရဲ​ကောင်းတို့ 🙏
​သွေး​ကြွေး ​အေးမသွားပါ ငါတို့ ပြန်​တောင်းမည် …
2021-08-10 at 10:20 PM
သူတို့မျက်စိရှေ့တင် လူငယ်တွေ အာ့လို လုပ်သွားတာ ဘားမှ မခံစားရဘူးလား ကျွန်ခံဖို့ပဲ စိတ်အား ထက်သန်နေတာ
သုည တတ says:
မင်းတို့အလှည့်ကျမှ အထက်ကအမိန့်ဆိုတဲ့ ဒီစကားမပြောနဲ့ စစ်ခွေးတွေရေ။
အထက်ကအမိန့်ထက် ပြည်သူတွေပေးမဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကပို
Skykhin StarMoon says:
ရင္နင့္စြာနဲ႔ ေျပာပါရေစ ေလးစားပါတယ္ သူရဲေကာင္းတို ့ရယ္ သူတို႔လက္ထဲမွာေတာ့ အႏိွပ္ဆက္မခံဘူး ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲကတာ တကယ္ကို ရင္နင့္ရပါတယ္ သူတို႔ဘယ္ေလာင္ေတာင္ နာက်င္ေနလိုက္မလဲ 😢
ရဲ နောင် says:
PDF. လေူတွေ ထောက်လှန်ရေးက. အဓိကပါ။ထောက်လှန်းရေးအားနည်းရင် ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။မင်းတို့ဘက်မှာပြည်သူတွေရှိပေမဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ယူနီဖေါင်းဝတ်ထားမှ ရခလား စခလားသိကြတာပါ။ယူနီဖောင်းမဝတ်ပဲထောက်လှန်းရေးလာရင် ပြည်သူတွေသတင်းမပေးနိုင်ကြတော့ဘူး။အဲဒီတော့ မင်းတို့လုပ်ရမှာက. စခနဲ့ရခတွေလာရင် ဘယ်လို ထွက်ပေါက်ရှာမလည်း ပီးတော့ မင်းတို့နေရာရဲ့ အဝင်ဝ. ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ အထောက်တစ်ယောက်တော့ ရှိထားရမယ် ဒါမှလည်း ရှောင်လို့တိမ်းလို့ ရမှာ။ မင်းတို့တွေ ဘေးကင်းမှ ဒီပဲဲကီးကအောင်မြင်မှာ ဘေးကင်းအောင်နေကြပါ။ဘေးကင်ူကြပါစေ
Mya Thet says:
2021-08-10 at 10:35 PM
လူငယ်လေးတွေ ကိုယ်တွေတောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ အရာ 😭ရင်တွေနာရပါတယ် အရေးတော်ပုံအမြန်ဆုံးအောင်ရမည် မအလရဲ့ ခွေးတွေ တကောင်မှမကျန်အောင် အမြစ်ကနှုတ်ပြစ်ကြမယ်
Naw Chit Myat Noe says:
အပိုမပါတဲ့ အသက်တစ်​ချောင်းကိုမှ စွန့်ရဲတဲ့ တကယ့်သူရဲ​ကောင်း​​တွေရယ် မင်းတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကကွာ ပြတ်သားလွန်းလှပါတယ်
ကလေးတွေ သေ သွား တာတောင် သူခိုးဓားပြ မိတဲ့အတိုင်း နင်တို့က ပုံမှန်အတိုင်း မိပါတယ်ဘာညာ အားရဝမ်းသာ အေးဆေးပြောနေကြ…နင်တို့အလှည့်အမြန်ရောက်ပါစေ နေ့တိုင်းဆုတောင်းတယ်..နင်တို့သားသမီးတွေ မိသားစုတွေ အကုန် ပြန်ခံရပါစေ..
2021-08-10 at 10:46 PM
ကျဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့ ဘဝတင်မက သူတို့မိသားစု ဝင်တွေရဲ့ဘဝပါပျက်ရတာ..
စခ ဒလန်တွေရဲ့ မိသားစုတွေကိုပါ ခွင့်မလွှတ်သင့်ဘူး…
မျိုးရိုးဆိုတာ မတိမ်ကောလေတော့ ဒီလို လူယုတ်မာတွေရဲ့မျိုးဆက်တွေလည်း အယုတ်တမာစိတ်ဓါတ်ပဲဆိုတာသေချာတယ်… ရှိမနေသင့်တဲ့ မျိုးဆက်တွေ…
Han Ne says:
2021-08-10 at 10:47 PM
ခုချိန်ထိ စွဒုတ်ခ လိုက်​ပေး​နေကြတုန်း လူငယ်​တွေကို .. လူယုတ်မာ ​တွေ ကို အုပ်စုလိုက် မြန်မြန်သာ ​ဘောင်ချာ စုတ်ပါ​တော့ ​သေမင်းရယ် ..
2021-08-10 at 10:51 PM
မိသွားလို့ လက်လွန်‌ေခြလွန်ရိုက်စစ်ပြီးသေသွားမယ့်အပြင် သတင်းအချက်တွေပေးခဲ့ရမှာစိုးလို့များလား ကလေးတွေရယ် ကြားရတာရင်တွေကွဲရပါတယ် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြတ်သားလွန်းတယ်
Shinning Sky says:
နားထောင်နေရင်း နဲ့ ကို သွေးတွေဆူပွက် လာပြီး မျက်ရည်ကျရတယ်…စိတ်မကောင်းလိုက်တာ..ညီလေး ညီမလေး တို့ရေ
2021-08-10 at 11:01 PM
မင်းတို့ သူရဲကောင်းတွေပါ လူမဆန်တဲ့ သူတွေရဲ့ စစ်ကြောရေးဆိုတာ သွေးကြွေးတွေများနေပြီပေါ့ ကြောက်နေတဲ့ တို့တစ်တွေကို မကြောက်တတ်အောင် သင်ပေးသွားတာလားကွာ စိတ်မကောင်းဘူး
2021-08-10 at 11:02 PM
ခွေးသူတောင်းစားတွေ ပြည်သူတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ နှိပ်စက်ပြီး ပထွေးမအလကို ကာကွယ်နေတဲ့ ကမကလတွေ
ဒီအသံဖိုင်ဟာ.ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ထုတ်ပေးတာနေမှာ…ဘယ်လိုမှ အပြင်ကို ပေါက်ကြားစရာမရှိတာကို…mad aloe တွေကွာ…lee lee lee ကွာ
2021-08-10 at 11:17 PM
ကလေးတွေရေ ရင်ထဲ တဆစ်ဆစ်နဲ့ပါ ဘာမှမရှိဘဲ ခုန်ချ အသေခံ သွားသတဲ့လား သူရဲကောင်း အာဇာနည်တွေရယ် 😪
Pinky Lwin says:
စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန် ရဲရင့်ကြတာ ။ သတင်းအချက်အလက်ကို အသက်ပေးကာကွယ်သွားတယ် ။ ရင်နှင့်အမျှ ခံစားရတယ် ကလေး‌တို့ရယ် ။ ဘဝဆက်တိုင်း လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်ဝရတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လူဖြစ်ပါစေ 🙏🙏🙏
2021-08-10 at 11:28 PM
ငါတို့ဟာ မင်းတို့လေးတွေလို မပေးဆပ်နိုင် သတ္တိမကောင်းနိုင်ကြသေးတာတွေးရင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှက်မိတယ် သူရဲကောင်းတို့ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ
Nway Oo KhaYay says:
ရင်ထဲမှာ မချိအောင် နာ‌တယ် ကလေးတို့ရေ 😢😢😢
တန်ဖိုးရှိတဲ့ အသက်တွေ ပေးလိုက်ရတာ မတန်လွန်းလို့ပါ။
ရင်းရတဲ့ တန်ဖိုးတွေက ကြီးလိုက်တာ 😓😓😓
ဒလန်တွေ သေရမှာ ။ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အသက်တွေနှမြောမိတယ် ။ ကောင်းမွန်တဲ့ဘ၀ကို ရောက်ကြပါစေ 😥
ရတနာ အောင် says:
၄၄ လမ်းက လူငယ် ၅ ယောက်။
ယောက်ကျားလေး ၄ ယောက်၊ မိန်းခလေး တစ်ယောက်ကို အသက်သေသည်အထိ ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ သူတွေကတော့
၁။ ဗျူဟာမှုး ဗိုလ်မှူးကြီး စိုးထွန်း
၂။ ဗိုလ်တစ်ထောင် မြို့နယ်မှူး
၃။ ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်မှူး
၄။ ဗိုလ်တစ်ထောင် စခန်းမှူး
၅။ ပုစွန်တောင် (၆) ရပ်ကွက် အုပ်ကြီး
၆။ ပုစွန်တောင် (၆) ရာအိမ်မှူး
၇။ ပုစွန်တောင် (၆)
၈. ၄၃ဘလောက်အောက်က ရာအိမ်မှူး ဦးမြင့်အောင် ကဒလန်ပါတဲ့
Khine Chit Su says:
2021-08-11 at 6:55 AM
နင်တို့ လူကြီး​တွေ $သုံးမကျကြလို့ လူငယ်​တွေ ရက်ရက်စက်စက်​သေ​နေကြတာ
တိရိစ္ဆာန်​တွေ​တောင် သူတို့ မျိုးဆက်​တွေကို ကာကွယ်ရမှန်း နားလည်တယ်
Zaw Min Lay says:
ရင်ထဲမှာ မချိအောင် နာတယ် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အသက်တွေ ပေးလိုက်ရတယ် မတန်လွန်းဘူး
Su Mon Smn says:
2021-08-11 at 8:52 AM
ခွေးသတောင်းစားတွေ ကျက်သရေမရှိတဲ့ အသံနဲ့ လူငယ်တွေသေတာကို ဒင်းတို့ $ရမ်း ကြိုးစားနေတဲ့ ပုံစံနဲ့
နင်တို့ သားစဉ်မြေးဆက် တူသောအကျိုး ပြန်ပေးဆပ်ကြ
Suzantoe Akkp says:
2021-08-11 at 9:48 AM
ရင်ထဲမှာ မချိအောင် နာတယ် ကလေးတို့ရေ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အသက်တွေ ပေးလိုက်ရတာ မတန်လွန်းလို့ပါ။ရင်းရတဲ့ တန်ဖိုးတွေက ကြီးလိုက်တာ 😭😭😭
Monica Blessing says:
အမှတ် ၃၇ ပထမထပ်
၂။ ဗိုလ်တထောင် မြို့နယ်မှူး
၄။ ဗိုလ်တထောင် စခန်းမှူး
၅။ ပုဇွန်တောင် (၆) ရပ်ကွက် အုပ်ကြီး
၆။ ပုဇွန်တောင် (၆) ရာအိမ်မှူး
၇။ ပုဇွန်တောင် (၆) ရပ်ကွက် ဒလန်များ
Lah Hel says:
ဘယ်လိုဖြေသိမ့်ရမလဲ သူတို့လက်ထဲရောက်သွားရင်လဲ သေမှာဘဲ အခုလို တိုက်ပွဲမှာ ကျသွားသော တော်လှန်းရေး ရဲဘော်အားလုံးကို အလေးပြုပါတယ်
စတေးထားတဲ့ အသက်ရဲ့ တန်ဖိုးတွေ တနေ့ကျ သွေးကြွေးပြန်တောင်း ပေးရမယ် ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေ😢
2021-08-11 at 5:59 PM
ရင်ထဲ တစ်ဆို့ နေ​​ေအာင် စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ မိသားစုတွေ ဘယ်လောက်ခံစားရလိမ့်မလဲ။ ေကြွသွားတဲ့ ကြယ်လေးတွေ ဒီလို ဘေးဆိုးတွေကင်ဝေးတဲ့ ကောင်းရာ ဘုံဘဝရောက်ပါစေ။